Ihe oriri na-edozi ahụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ihe oriri na-edozi ahụ
Ebe ọ bụ n'oge ochie, ndị mmadụ na-eji ash dịka fatịlaịza. Ash ọ bụghị nanị na-akụ akwa, kama ọ na-arụkwa ala. Eji ash na horticulture n'otu oge na-eme ka ma nke mejuputara na nke ihe omimi nke ala. Ash nwere ihe onwunwe iji belata acidity, mee ka mpempe akwụkwọ na-achasi ike ma wepụ ala.
Ihe dị mkpa ka ị mara banyere ịbawanye ọgaranya na dacha
Osisi osisi na-eto eto ruo mita 2.5-3 mita nke nwere nnukwu akwụkwọ ma na-elegharị anya n'ọbụ aka. Ụdị osisi ahụ bụ ihe dị iche iche, nke na-adọta ọtụtụ ndị na-elekọta ubi ma na-eme ka ọchịchọ na-eto eto. Osisi na-esi ísì nwere ụfọdụ ụzọ aghụghọ nke ịkụ na-elekọta n'ubi, nke kwesịrị ịgụ.
Fatịlaịza maka ịzụ Nri osisi - ntuziaka maka ojiji
Uwe elu na-eri nri na ịnweta nri bụ ihe dị mkpa nke na-eto eto dị iche iche, n'ihi na mmeghe nke okwu ahụ anaghị emepụta ihe niile dị mkpa. Kedu nri a chọrọ maka seedlings? Enweghị ala na potassium, dịka ọmụmaatụ, ga-eduga n'ọtụtụ kachasị elu nke mkpụrụ osisi, na ụkọ anụ ọkụkụ, uto nke mkpụrụ osisi ma ọ bụ tomato agaghị abụ ọgaranya ma kwuo okwu dịka anyị ga-achọ, na-enweghị nitrogen, a ga-atụ egwu uto nke ifuru na mkpụrụ osisi.
"Ncha-2": ntụziaka maka iji ọgwụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe ubi bara ụba, ọ bụghị nanị na ị ga-elekọta osisi ahụ mgbe niile ma nye ha ọnọdụ dị mma, kamakwa itinye aka na fatịlaịza ha. Nhọrọ kachasị mma nke ọtụtụ ndị ọrụ ugbo bụ ngwaahịa ndị dị ndụ "Shining-2", nke na-agụnye microorganisms sitere na kụrụ ndị bara uru a họọrọ.
Yist dị ka fatịlaịza n'ihi na osisi: esi mee ka yist mgbakwasa
Ọ dịbeghị anya ọ bụghị ihe nzuzo na-eji ihe ndị na-eko achịcha eme ihe ọ bụghị naanị na ịkwadebe nri na ịṅụ mmanya, kamakwa na ọgwụ na cosmetology. Nhọrọ ọzọ a na-eji bụ ihe na-eko achịcha maka ogige nri, maka nri nri. Tụlee n'isiokwu a otú ha si emetụta osisi na otu esi eri nri na ihe iko achịcha.